संविधान सभाको अर्को चुनाऊ
राजनीति त्यसै त नबुझिने विषय झन नेपालको राजनीतिको त के कुरा गर्नु र ? कुरा गरेरै साध्य छैन् । न सत्ता पक्ष दलहरू गम्भिर देखिन्छन् न सत्ताका लागि कसरत गरिरहेका दलहरु इमान्दार देखिन्छन् ! सायद अजब देशको गजब कहानी भनेकै यहि नै होला । भाद्रदेखि चलिरहेको कुर्सीको द्धन्द्ध यति विधि उछालिएर आयो कि त्यो समयको दौडानमा ठूला भनौंदा दलहरुको दिमागमा संविधान निर्माणको कार्य तालिका कहिल्यै घुसेन् उनीहरुको दिमागमा खाली एउटै मात्र कुरा नाचिरह्यो – सत्ता जोगाइराख्न सकेमा वा त्यो कुर्सीमा पुग्न सकेमा जाबो संविधान त एक चुट्कीको भरमा भैहाल्छन नि !
तर अहिले नेपाली राजनीति गम्भिर मोडमा आएर उभिएको छ, आजको दिनदेखि संविधान जारी हुनु पर्ने दिन धेरै छोट्टिएर नजिकिदै आएको छ अर्थात जम्मा ३७ दिन बाँकी । तर सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने जेठ १४ मा संविधान निर्माण नहुने ठोकुवा गर्दै भन्न थालेका छन् – लौ ! अब जेठ १४ मा यी माओवादीका कारणले संविधान त एक दुई तीन निर्माण हुँदैन् । कांगे्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त मुखै फोरे – माओवादीले म्याद गुज्रने अवस्थामा पुर्‍यायो, अब चुनाव उचित ।
हरे यी बुद्धिहिन नेताहरुले फेरि के का लागि चुनाव गराउने हुन् ? फेरि संविधान सभाको निर्वाचन ? मलाई त दया जागेर आयो यी भातमारा नेताहरुको चालीमाली देखेर – नौ वर्षदेखि जनप्रतिनिधीविहीन स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नसकेका यी खाईदेऊ डाँकाहरुले के को चुनाव गराउलान् अर्को ??